Obama oo wacad ku maray in dagaal cirka ah la geli doono Xarakada Al-shabaab – idalenews.com
Obama oo wacad ku maray in dagaal cirka ah la geli doono Xarakada Al-shabaab
Sida ay qortay Wakaaladda Wararka Ap ayaa Madaxweynaha Dalka Maraykanka Obama wuxuu wacad ku maray in Dagaalo Cirka ah uu ka gaysanayo Dalal ay ka mid yihiin Soomaaliya, Liibiya iyo Yaman.
Madaxweynaha ayaa sheegay in Xukuumaddiisu ay la dagaalami doonto xarakada Alshabaab iyadoona loo adeegsan doono waa sida uu warka u dhigaye Diyaaradaha aanay Cidi wadin ee Darooniska loo yaqaano.
Wararkan ay qortay Wakaaladda Wararka ee AP ayaa lagu sheegay in Madaxweynaha maraykanka ay ka go’an tahay sidii loo cirib tiri lahaa Xarakada Alshabaab ka dagaalama dalalka Soomaaliya, Liibiya iyo Yaman kuwaasoo uu sheegay in ay khatar aan yareyn ay ku yihiin Dalalka Deriska sida warbixinta lagu sheegay.
Madaxweyne Obama ayaa muujiyay sida uu uga xun yahay Weerarkii Qaraxyo ee dhawaan lagu qaaday Xarumaha Maxkamadaha Magaalada Muqdisho taasoo uu sheegay in ay weli muuqato khatarta Xarakada Alshabaab ay ku hayso Dawladda Federaalka Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa cadeeyay inuu bar bar taagan yahay dawladda Federaalka Soomaaliya gacan weyna uu ka gaysan doono sidii meesha looga saari lahaa dhaq dhaqaaqa Xoogaga Xarakada Alshabaab oo uu sheegay in weli awoodoodii ay jirto.
Madaxweynaha ayaa ku soo celiyay in Dagaalka ay ku qaadayaan Alshabaab in ay u adeegsan doonaan Diyaaradaha wax basaasa iyo kuwo meelaha fog wax ka toogta isagoona ku adkaystay in Maraykanku uu sii wadi doono Dagaalka uu kula jiro Xarakada Alshabaab.
Ugu danbeyntii dawladda Maraykanka ayaa hore u balan qaaday in ay taageeri doonto Dawladda federaalka Soomaaliya oo ay sheegeen in ay la daalaa dhacayso wax ka qabashada soo celinta Ammaankeeda.
Warar sheegaya in Inj: Yariisoow loo magacaabay Afhayeenka Madaxtooyadda Soomaaliya
Francesca Mosca iyo Madaxwyane Faroole oo kulmay Magaalada Garoowe